Back 17, Sunday - June 2018
၂၀၁၈ ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲအောင်စာရင်းအား အများပြည်သူသိရှိနိုင်စေရန် အသိပေးဖော်ပြခြင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာရေးဦးစီး ဌာနက ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သော ၁၃၇၉(၂၀၁၈)ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲတွင် သံဃာတော်များ၊ သာသနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင်များနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြရာ ပထမကြီးတန်းတွင် ဖြေဆိုသူ ၁၀၂၃၆ ပါး/ဦး အနက် ၃၈၁၇ ပါး/ဦး အောင်မြင်၍ ၃၈.၂၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပထမလတ်တန်းတွင် ဖြေဆိုသူ ၁၀၁၄၂ ပါး/ဦးအနက် ၄၉၇၉ ပါး/ဦး အောင်မြင်၍ ၄၉.၀၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပထမငယ်တန်းတွင် ဖြေဆိုသူ ၁၁၂၆၉ ပါး/ဦး အနက် ၅၄၆၃ ပါး/ဦး အောင်မြင်၍ ၄၈.၄၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ အခြေပြုမူလတန်းတွင် ဖြေဆိုသူ ၁၆၁၄၉ ပါး/ဦးအနက် ၉၉၀၀ ပါး/ဦး အောင်မြင်၍ ၆၁.၃၀ ရာခိုင်နှုန်း အောင်မြင်ခဲ့ကြပါသည်။
၁၃၇၉(၂၀၁၈)ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲတွင် အောင်မြင်ကြသော သံဃာတော်များ၊ သာသနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင်များနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအနက် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယနှင့် သီလရှင်ပထမ ရရှိခဲ့ကြသော အထူးအောင် ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ကြပါသည်-
စည်ရှင်ကျောင်း၊ မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံ တိုက်သစ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ဇိနောဒယသီလရှင်စာသင်တိုက်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
မဟာဇောတိကာရာမ ကျောင်းတိုက်၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
သာသနာ့ရောင်ခြည် ကျောင်းတိုက်၊ မုံရွာမြို့၊
ဓမ္မဝိနယရံသီကျောင်း၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပိန္နဲကုန်းကျောင်းတိုက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်
၁၃၇၉(၂၀၁၈)ခုနှစ် ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများကို နေပြည်တော်/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့ရုံးများတွင်လည်းကောင်း၊ နေပြည်တော်/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် သာသနာရေးမှူးရုံးများတွင်လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာစာဖြေဌာနများရှိ မြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့ရုံး များနှင့် မြို့နယ်သာသနာရေးမှူးရုံးများတွင်လည်းကောင်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၁၃၇၉(၂၀၁၈)ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများကို နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ Website www. mahana.org.mm၊ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန Website www. mora gov.mm နှင့် သာသနာရေးဦးစီးဌာန Website www.dra.gov.mm တို့တွင်လည်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။